Imithombo yeendaba kunye noxinzelelo-Isiseko soMvuzo
Ikhaya Iibhulogi zeendaba Imidiya yoluntu kunye noxinzelelo
lawula888 12I Disemba 2020 Iindaba zamva
Kukho intetho eninzi kule minyaka idlulileyo malunga nokuba ukusetyenziswa kweendaba zosasazo (i-SMU) kunxibelelene nokudakumba. Olu phononongo lutsha kwiAmerican Journal of Preventive Medicine lubonisa ukuba kunokuba njalo. Sijonge ukusetyenziswa kweendaba zosasazo kwisicwangciso sethu sesifundo sasimahla kwi Ukuthumela imiyalezo nge-Sexting, Iphonografi kunye neBongo yaBafikisayo. Sijonge ukudakumba kakhulu kwi Iimpawu Zengqondo Zobunono.
Olu phononongo lutsha lujonge ama-990 aseMelika aneminyaka eli-18 ukuya kwengama-30 ubudala abebengonwabanga ekuqaleni kophononongo. Ivavanye emva kweenyanga ezintandathu. Ukusetyenziswa kweMithombo yeendaba yasekuhlaleni:
“Yayihambelana kakhulu nokuzimela nokukhula koxinzelelo kwiinyanga ezi-6 ezilandelayo. Nangona kunjalo, kwakungekho nxu lumano phakathi kobukho boxinzelelo kwisiseko kunye nokwanda kwe-SMU kwezi nyanga zintandathu zilandelayo.
Eli phepha liqhubeka lithi:
Kukho izizathu ezi-3 eziphambili zokuba kutheni i-SMU inokunxulumana nokukhula koxinzelelo. Enye kukuba i-SMU ithatha ixesha elininzi. Kule sampulu, umthathi-nxaxheba ophakathi usebenzise malunga neeyure ezi-3 zosasazo lwentlalo ngosuku, ngokuhambelana noqikelelo lwesizwe. Ke ngoko, kusenokwenzeka ukuba eli xesha lininzi ligudluza imisebenzi enokuba luncedo ngakumbi emntwini, njengokwenza ubudlelwane obubaluleke ngakumbi emntwini, ukufezekisa iinjongo eziyinyani, okanye nokuba namaxesha okubonakalisa okuxabisekileyo.
Isizathu sesibini sokuba i-SMU inokunxulumana nokukhula koxinzelelo inxulumene nokuthelekiswa kwezentlalo. Kubantu abadala abancinci, abakwimeko ebalulekileyo ngokubhekisele kuphuhliso lwesazisi, ukubonakaliswa kwemifanekiso engafikelelekiyo kwiindawo zosasazo zasekuhlaleni kunokubangela ukudakumba.
Isizathu sesithathu kukuba ukuboniswa rhoqo kwimithombo yeendaba zentlalo kungaphazamisa iinkqubo eziqhelekileyo zophuhliso lwe-neurocognitive. Umzekelo, iindlela zesiko ezinxulumene nophuhliso lobudlelwane boluntu, njengokuqonda ngokwasentlalweni, ukuqonda ngokwakho, kunye nokulungiswa kwembuyekezo kwezentlalo, kubandakanya ukuhlangana okunzima phakathi kweendawo ezininzi zobuchopho ezinjenge-dorsomedial preortal cortex, medial preortal cortex, kunye ne-ventral striatum.
"Nangona uphando kule ndawo luphambili, kunokwenzeka ukuba imeko yeemeko ze-SMU, ezinje ngebhayisikile ekhawulezileyo yomvuzo kunye neenkqubo zokuqonda, zinokuphazamisana nophuhliso oluqhelekileyo, olunokuthi emva koko luququzelele ukukhula kwemeko ezinje ngoxinzelelo. Uphando olwenziweyo kufuneka lwenziwe kule ndawo kuvavanyo lwezi ndlela zinokwenzeka. ”
Olu phononongo lubonelela ngedatha yokuqala enkulu ephanda kwicala le-SMU kunye noxinzelelo. Ifumana ubudlelwane obomeleleyo phakathi kwe-SMU yokuqala kunye nokukhula okulandelayo koxinzelelo kodwa akukho kunyuka kwi-SMU emva koxinzelelo. Le patheni iphakamisa unxibelelwano lokwexeshana phakathi kwe-SMU kunye noxinzelelo, inqobo ebalulekileyo yobume. Ezi ziphumo zibonisa ukuba iingcali ezisebenza kunye nezigulana ezixinezelekileyo kufuneka ziqaphele i-SMU njengeyona nto ibalulekileyo emngciphekweni wokukhula kunye nokudakumba okunokubakho koxinzelelo (ugxininiso longezwa).
Ikopi epheleleyo ye Unxibelelwano lwexeshana phakathi koSetyenziso lweMidiya yoLuntu kunye noxinzelelo ngoku iyafumaneka kufikelelo oluvulekileyo.